လတ်တလောအနုပညာများ - Random of NangNyi
Home random လတ်တလောအနုပညာများ
by NangNyi 12:39 PM
အင်တာနက်က သုံးမကောင်းဘူး.. ပို့စ်တင်ဖို့ကို မနည်းလုယက်ပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရတယ်..
အိမ်မှာလည်း ခွဲတမ်းနဲ့ မီးပျက်ပျက်နေတော့ ပို့စ်ကို မရေးဖြစ်ဘူး.. တစ်ညခြားလာတဲ့မီးမှာ စာဖတ်ရမလား.. စာရေးရမလား.. ရုပ်ရှင်ကြည့်သင့်လား.. ပန်းချီဆွဲလိုက်ရမလား.. ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ .. အတော်လေး ရွေးချယ်ရခက်နေတယ်..
ဘတ်စ်ကားတွေက ကျပ်တယ်.. ၁၀၇ ဒတ်ဆန်းကားစီးတာ.. ဘေးခုံတစ်ဖက် ၆ ယောက်.. လက်တွေက ထားစရာမရှိလို့ ၂
ဖက်လုံး တန်းကိုကိုင်ထားရတယ်.. အလယ်ခုံမှာက ၅ ယောက်.. တစ်ခါတလေ ၆ ယောက်.. တစ်ယောက်ရင်ခွင်ထဲ တစ်ယောက်ဝင်လို့.. ဇာတ်လမ်းရှာချင်ရင် အတော်လွယ်တဲ့အနေအထားပဲ.. အတွယ်က ၁၀ ယောက် ၁၁ ယောက်.. ခြေကို တစ်ဖက်ပဲတင်.. လက်က အထဲဘားတန်းကိုမြဲမြဲကိုင်ထား.. ချိုင့်တွေ အိတ်တွေ ဖိုင်တွေ.. အို ရှုပ်တယ်.. အထဲကလူတွေဆီ အားလုံး ပစ်ပေးထားလိုက်.. ကားကွေ့လိုက်တိုင်း ယိမ်းခါသွားတဲ့အခါ တွယ်စီးသူတွေရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုနေမှာပါလိမ့်..
စကားပြောနေကျ သူငယ်ချင်းက အတော်လေးအလုပ်ရှုပ်ရှုပ်နေတယ်.. စကားလည်းကောင်းကောင်း မပြောဖြစ်.. ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနဲ့.. သူ့ reply လာမှာကိုစောင့်ရတာက စိတ်မရှည်ချင်စရာ... တစ်နေကုန် စကားပြောဖော်မရှိ.. သီချင်းသံတွေဘာတွေလည်းမကြားရ.. အလုပ်လုပ်ရင်း ငိုက်ငိုက်နေတတ်တယ်.. netရိုးကိုးပေါက် ဘလော့လည်တာကလည်း ဆက်တိုက်တွေလည် စာတွေဖတ်ဆို ညဉ်းငွေ့တယ်.. လူက ထုံလာတယ်.. ၂ အိမ်လောက် စာဆက်တိုက်ဖတ်ပြီးရင်.. ဆက်မဖတ်နိုင်.. အဲဒါနဲ့ပဲ ရုံးအပြင်ထွက် ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက် မကြာမကြာလုပ်နေရတယ်..
အမေက အိမ်မှာမနေဘဲ အပြင်ထွက်အလုပ်တွေများနေတယ်.. သူ့ခင်မျာလည်း သနားစရာပါ.. တစ်နေ့တစ်နေ့ ကားတစ်စီးနဲ့ထွက်.. ဟိုသွား ဒီသွား.. အာရုံတွေကများ.. ကားမောင်းရလွန်းလို့ tension တွေများပြီး သွေးတွေတိုးလိုတိုးနဲ့.. ညည ဆေးသောက်အိပ်နေရ.. ခြေထောက်တွေ တောင့်နေလို့ဆိုပြီး နှိပ်ပေးရတာက ခဏခဏ..
အိမ်မှာလည်း ဟင်းကောင်းကောင်းမချက်တာကြာ.. ရှိတဲ့ ready made အသားတွေ.. ဟင်းချိုထုပ်တွေနဲ့.. စားရတာလည်း ကောင်းသလိုလိုနဲ့ မတင်းတိမ်.. အရင်လို (ရှလွတ်..) အရွက်စုံသုပ်တို့.. ကြံမဆိုင်ဟင်းချိုတို့.. ၀က်သားပေါင်းတို့..
အော် ... လွမ်းမိ..
တီဗီက ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေ မှန်မှန်စောင့်ကြည့်ဖြစ်နေတယ်.. အရှေ့ကမသိခဲ့တာတွေ အိမ်ကလူတွေကိုမေးပြီး ရောက်ရာ နေရာကဆက်ကြည့်.. ဘယ်တော့ရပ်သွားဦးမလဲတော့မသိ.. မီးမှန်မှန်မလာတော့ (ကိုယ်တိုင်လည်းအချိန်သိပ်မရှိတော့) အခွေတွေလည်း မကြည့်ဖြစ်တာများနေပြီ.. ၀ယ်စရာပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူး.. ရုပ်ရှင်ခံစားမှုဆောင်းပါးတွေပဲ လှိမ့်ဖတ်နေလိုက်တယ်.. ဒါပဲအေးပါတယ်..
Photoshop ကိုပဲ ကလိနေမိတယ်.. ကျူတိုရီယယ်တွေလျှောက်ကြည့် လိုက်လုပ်.. ကိုယ့်ဘာသာ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်တွေလုပ်နဲ့.. အတော်လေးပျော်စရာကောင်းနေတယ်.. CS3 ကို စမ်းသုံးကြည့်ချင်နေတာ.. ခုထိတော့ အဆင်မပြေသေးဘူး.. ပြေသွားမှာပါလေ... နောက်မကြာခင်ဖြစ်လာမှာပေါ့.. မဟုတ်ဖူးလား..
..... .... .
.... .. . .
ဘာပို့စ်တွေ လျှောက်ရေးနေမိမှန်းကို မသိပါဘူး..
လတ်တလောအနုပညာများ Reviewed by NangNyi on 12:39 PM Rating: 5
Anonymous January 27, 2009 1:02 PM
ရန်ကုန်ရောက်ရင် ၁၀၇ ဒတ်ဆန်းကား လိုက်စီးအုံးမယ် ဇတ်လမ်းရှာချင်လို့း)
khin oo may January 27, 2009 1:41 PM
ရေးချင်တာ ရေးတာ ကိုဖတ်သွားတယ်။
revolution January 27, 2009 1:47 PM
အော်...အဲဒါမျိုးကိုယ်လည်းခံရပါ့ ညီ့ဆီကreply ပြန်ရောက်ဖို့ စောင့်ခဲ့ရတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ..
Aye Myat Myat Ko January 27, 2009 1:50 PM
post က ဘယ်လိုဖြစ်လို့ နှစ်ခုထပ်နေတာလဲဟင်
မောင်ရှင်းသန့် January 27, 2009 2:59 PM
ကိုကြီးမျိုးရေ ၁၀၇ စီးမိလို့ကတော့ ဇာတ်လမ်းမရဘဲ သရက်တန်းမှာပဲ ညအိပ်နေရမယ်ဗျ ။ ဟီးးးး အဓိပတိ စီးဗျ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ။
အဲ.... ဒါနဲ့ အန်တီနန်းညီရေ...
မီးမလာတာ ရင် ကြက်ဆူဆီနဲ့ မောင်းတဲ့မီးစက် ၀ယ်ထားဗျ ။ မီးမလာဘူး.. မီးမလာဘူး လို့ ခဏခဏ ပြောနေရင် အားနာလို့ ဟီဟိ :P ။
ဖိုးဂျယ် January 27, 2009 3:02 PM
ဘာပိုစ့် မှန်းမသိတာကို ဘာအစ်ကိုက
ဘာ ဘာ ဘာနဲ့ ဖတ်သွားတယ်
MANORHARY January 27, 2009 3:43 PM
သတိုးရာဇာ January 27, 2009 4:09 PM
စားချင်တာလေးတွေလည်း ရေးထားတာတွေ့ တယ်...
သက်ပိုင်သူ January 27, 2009 7:54 PM
တောင်ပေါ်သား January 28, 2009 7:50 AM
အင်းခုတလော ဘာတွေ ဖြစ်နေမှန်းကို မသိပါဘူးဗျာ အတူတူပါပဲး)
Andy January 28, 2009 4:46 PM
ငါ့လို ဧကစာ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်နေ ပြီးရော
I amaPR manager who currently live in Yangon. Started blogging since 2008 till now. Half of my posts lost when I failed to update the hosting payment. :'( I am interested in Art, Movie, Photograph, Traveling, Music and Food!
pregnancy post (8)
thoughts of today (7)
ပို့စ် ၁၀၀ (5)
သူ tag ကိုယ် tag (9)
I took the So Shape Challenge and here's what happened..
By: I DO IT MYSELF, YOU DIY… – by valerie anglade
Follow my Pin
Follow Nang's board my ART on Pinterest.
ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းသိဖို့ လက္ခဏာ ၁၀ ခု
အသိသာအထင်ရှားဆုံး ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာ ၁၀ ခုအကြောင်း ဖတ်မိထားတာကို ပြန်ပြောပါ့မယ်.. နန်းညီတုန်းကတော့ ၁။ ၅။ ၆။ ၉။ တွေဖြစ်လို့ ၁၀ ကိုလုပ်ကြည့်ရင်း က...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့အတွက် (၂၁ ပတ်)
ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလတွေမှာ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို လိုက်ရှာဖွေဖတ်ရင်းနဲ့ မြန်မာလိုရေးသမျှ ဆောင်းပါးတွေမှာ မပါတတ်တဲ့ တချို့အချက်ေ...
#၁# ဆင်ခြင်ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပါစေ.. သူတကာထက်ထူးပြီး ဉာဏ်မကောင်းရင် နေပါစေ.. အမှားအမှန် အကောင်းအဆိုး ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ ပညာ...
ခုတလောမှာ ဟော့နေတဲ့ ၁၃ နှစ်သမီးလေးကို ကလေးမွေးခိုင်းရေး မမွေးခိုင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟိုတွေးဒီတွေးလုပ်ရင်း ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့ အကြောင...
ကိုယ် ငေးမကြည့်မိခဲ့သော နေဝင်ချိန်များ
လူတွေ ဘာကြောင့် ခရီးသွားကြပါသလဲ.. တစ်ခါတလေတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်မဟုတ်ဘဲ သူများအကြောင်းတွေ တွေးမိတတ်သည်.. ခုခေတ်မှာ လူတော်တော်များများက ...
ကလေးတွေဟာ သူတို့အသက်အရွယ်အလိုက် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့ အမျှ စူးစမ်းစိတ်တွေသိချင်တာတွေ အရမ်းများလာပါတယ်.. သူတို့ဟာ အချိန်တုိုင်း သင်...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့အတွက် (1st Trimester)
ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းသိနိုင်မယ့် လက္ခဏာ ၁၀ ခု ကို ရေးဖူးပါတယ်.. ကိုယ်ဝန်ရှိစအချိန်တွေမှာလို့ ပြောပေမယ့် ရှိခါစ ၁ ပတ် ၂ ပတ်မှာတော့ စပြီး သိကြသူန...
အချစ်အကြောင်းကို စပြောမည်ဆိုလျှင် ဘယ်ကစပြောရမည်လဲမသိ.. အချစ်ကို ဘယ်မှာစပြီး မြင်ဖူးသည်ကို ပြောရမလား သို့မဟုတ် ဘယ်မှာစပြီး သိပ်ချစ်သွာ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့အတွက် (၂၂-၂၃ ပတ်)
ကလေးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ မိဘများ လုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၁၀) ချက်
၁) ကလေးနာမည်တွေ မတပ်ထားပါနဲ့ ကျောပိုးအိတ် ထမင်းဗူးအိတ် ထီး စတာတွေမှာ ကလေးနာမည်ပါတဲ့ ကတ်ပြားလေးတွေ ချိတ်ပေးထားတာမျိုး မိဘတွေ လုပ်လေ့ရှိပါ...